Siyaasada Arimaha dibada dawlada ayaa inoo qaabilsan cidii seeradaa dhaaftaana waa danbiile qaran | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Siyaasada Arimaha dibada dawlada ayaa inoo qaabilsan cidii seeradaa dhaaftaana waa...
Siyaasada Arimaha dibada dawlada ayaa inoo qaabilsan cidii seeradaa dhaaftaana waa danbiile qaran
Wadan walba oo caalmaka kajiraa waxa uu leeyahay arimo siyaasad dibadeed,waxaana u qaabilsan hay ado gaara iyo wasaarado loogu talagalay hawshaas si gaara. waxaa intaa dheer xeerar iyo siyaasado dawladu ay leedahay oo kuwa jahan arimaha dibada,sidaa daraadeed majiri karaayo siyaasi arin aan laga tashan laysa ogeeyn,aan ka turjumayn siyaasada arimaha dibada dalkeenu ka leeyahay,inta la ordo si iskiis ah u baahin kara isagoo kamid ah dawlada soomaaliyeed hay adaheeda kala duwan ama ha haado labada aqal ama golaha wasiirada iyo dhamaan hay adaha kala duwan ee dawliga ah.
Dalwalbaana waa sidaa,arimaha siyaasada dawladi leedahay maha fadhi ku dirir iyo waxaad jeceshahay in aad iska faa fiso oo bad aad gasho aan laguu dirsan.Siyaasadu waa ilaalinta nidaamka iyo kala danbaynta. Agaasime Abdullahi dool hadii fikirkiisu yahay midka uugu saxsan waxaa meesha taal matihid qof shacab ah dawlad baad kamid tahay waliba wasaaradii arimaha dibada ma hubisay in fikirkaagu yahay mid ku qotama siyaasada dawladaada,mise waa mid ka soo horjeeda? ma u haysataa ogolaansho iyo talo lagula ogyahay? nin walbaa in uu ilaaliyo xuduuda dawladnimo iyo siyaasada waa lagama maarmaan.
Waxa uu gutay waajibaadkiisii shaqo isagoo ilaaliyay haybada iyo sharafka iyo siyaasada dalkeena iyo dawladeena aynu kaleenahay ama la leenahay caalamka. waxa uu inoo ilaaliyay seerada siyaasadeed ee aysan cidina ka gudbi karayn. waana in siyaasi walbaa lee yahay xad celiya maha dawladnimo jaantaa rogan iyo in cidwalbaa afka furato. Maadama cawad iyo Agaasimihiisu ahaayeen rag saaxiibo dhaw ah iskuna kalsoon hadana nidaamka dawliga ah iyo sharciga isagoo dhawraya ayuu shaqadii ka qaaday markii saaxiibkii galay arimo uusan shaqo ku lahayn.
Sifahan ayaa ah in wax laga barto ah nidaam iyo kala danbayn.Agaasimuhuna waxa uu ahaa nin aqoon leh wuu is gartay oo aqbalay xilka qaadistaa. dawladnimadu waa sidan. waa mahad san yahay wasiirkeena arimaha dibada mudane cawad. waxaa hadaba nasiib daro ah in had iyo jeer aad arkayso kuwo xildhibaana ah,oo ka hadlaya xiriirka u dhexeeya Emaraatka iyo dawladeena xiriirka u dhexeeya qadar iyo dawladeena xiriirka u dhaxeeya kenya iyo dawladeena oo si indho la aan ah ay u dhex dabaalanayaan kuwaas oo aan iyagu shaqaba ku lahayn baarlamaana aan la horkeenin isla markaana aanu jirin ajande ama qorshe horyaal oo ay ka doodaan. war dawladnimadu sidaa maha!
Hadii wafti yimaado dalkeena waxaad arkaysaa kuwo baarlamanka ah oo sheegta mucaarad oo doonaaya in loo sheego waxa waftigaasi u sheegeen madaxweynaha ama xukuumada! alyacni iyagii baarlamaanka ahaa ayaa iska dhigaya xukuumadii iyo madaxtooyadii ama si kale hadaan u cadayno madaxweynihii dalka iyo raysal wasaarihii. tani waxay cadaynaysaa badawnimada kuwa ku gabada mucaaradka ama siyaasiyiinta baarlamanka ee ah dhab ahaan shabakad maafiyo caalami ah oo ku xiran shabaabka,ganaacsatada bakaaraha,kuwa ku gabada ciidanka xooga dalka iyo dalalka cadawga u ah soomaaliya ee dhaqaaluhu ka yimaado sida Emaraatka. hadafkooduna waxa uu yahay in sirta dalka soomaaliyeed cadawga loobandhigo bacdamaa ay kusoo qaateen qandaraas lacageed. waxayna is hortaagayaan oo diidan yihiin kuna dagaalamayaan in dalka soomaaliya caasimadiisa MOGDISHO aysan helin wax nabad ah shacabkana lagumaado sidaad u jeedaan waxa dadka laayaana waa shabkadaan maafiyo,in dawladnimadii soomaaliyeed dib u dhalan,tanoo ay ku badasheen doolar in ay helaan.
Waxay iska dhigayaan mucaarad laakiin sirtii dalka ayay faafinayaan,arimahan sirta dalka ee idaacadaha iyo saxaafada lala wareegayaa maha sax waa danbi dan soomaaliyeed maha shisheeye ayaa loo adeegayaa.Laakiin wax waliba waxay leeyihiin masuuliyad qofkastana qofbaa xukuma oo ay ka dhaxaysaa wada shaqayn,hay ado sirdoon baa jira oo qaabilsan arimahan waa in ay wax ka qabtaan sidaa cawad.
Dawladi waa tii sir leh cidii fara gashatana qabata.dadka siyaasada ku jiraa ama dawlada u shaqeeyaa waa in ay is ilaaliyaan dhawraan sharciga xadkoodana aysan ka gudbin hadaysan kolkaa ahayn jawaasiis cidkale shaqo u haysa oo bareertay. waxaan u rajaynayaa shacabka soomaaliyeed dawladnimo guul nabad iyo nolol.
Previous articleرئيس جمهورية أرض الصومال يُطلق تصريحًا هامًا
Next articleGolaha Wakiillada oo ka dooday Xeer Xasaannada ka qaadaya Goleyaasha Deegaanka